Myanmar agrees to the appointment of H.E. Mr. Lyying SAYAXANG as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Lao People’s Democratic Republic to the Republic of the Union of Myanmar – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Myanmar agrees to the appointment of H.E. Mr. Lyying SAYAXANG as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Lao People’s Democratic Republic to the Republic of the Union of Myanmar
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Lyying SAYAXANG as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Lao People’s Democratic Republic to the Republic of the Union of Myanmar in succession to His Excellency Mr. Nilahath SAYARATH.
Mr. Lyying SAYAXANG was born in Houaphanh Province, Lao People’s Democratic Republic on 5th August 1954. He obtained Bachelor of Education Degree from the University of Education in the Lao People’s Democratic Republic.
From 1978 to 2014, he served in various capacities at Teachers’ Training Institute, Vientiane Province, Saysomban Special Zone and Inspection Department of the Ministry of Education. He also served at Lao Overseas Department of the Ministry of Foreign Affairs. Currently, he is serving as Director of Inspection Department of the Ministry of Foreign Affairs.
Mr. Lyying SAYAXANG is married, and has two sons and two daughters.
Dated: 17 November 2014.
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ နီလာဟတ် ဆိုင်ရာလတ်၏ နေရာတွင် မစ္စတာ လိုင်ရင်း ဆိုင်ညဇန် အား ခန့်အပ်ရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရက သဘောတူညီပြီး ဖြစ်သည်။
မစ္စတာ လိုင်ရင်း ဆိုင်ညဇန်ကို ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင် လာအို နိုင်ငံ၊ ဟွာဖန်းပြည်နယ်၌ မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် လာအိုနိုင်ငံ၊ ပညာရေးတက္ကသိုလ်မှ ဝိဇ္ဇာ ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါသည်။
၎င်းသည် ၁၉၇၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဆရာ အတတ်သင် ပညာရေးသင်တန်းကျောင်း၊ ဗီယင်ကျန်းပြည်နယ် ပညာရေးဌာန၊ ဆေဆွန်းဘန် အထူးဇုန် ပညာရေးဌာနနှင့် စုံစမ်းလေ့လာရေးဌာနတို့တွင်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ ပြည်ပရောက် လာအိုနိုင်ငံသားများဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနတို့တွင်လည်းကောင်း ရာထူး အသီးသီးဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး၊ လက်ရှိတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စုံစမ်းလေ့လာရေး ဦးစီးဌာနတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
မစ္စတာ လိုင်ရင်း ဆိုင်ညဇန်သည် အိမ်ထောင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သားနှစ်ယောက် နှင့် သမီးနှစ်ယောက်ရှိပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်